Iyo evaporation kugona kweiyo spray mhute fan mvura inowedzerwa zvakanyanya. Mvura inotora kupisa panguva yekubuda kwemhepo uye inoderedza kupisa. Panguva imwecheteyo, inogona kuwedzera hunyoro hwemhepo, kuderedza guruva uye kuchenesa mhepo. Nheyo yekupfapfaidza mhute fan: A: Iyo ce...
Ndechipi chikonzero chekutanga kunonoka kweFloor type fan, Maitiro ekugadzirisa sei kunonoka kweFloor type fan?
Muzhizha rinopisa, marudzi ose emidziyo yemagetsi inoda kushandiswa. Mukuwedzera kune anowanzo shandiswa air conditioners, mafeni zvakare sarudzo yakanaka. Kuitwa kwemutengo kwakanyanya kwazvo. Kunyangwe iyo nyaradzo ingave iri pakati nepakati, iri nyore kushandisa uye yakachipa, uye iri nyore kwazvo ku...
Nheyo yekushanda yecylindrical blower
Musimboti wekushanda wecylindrical blower Iyo yekushanda yecentrifugal blower yakafanana neye centrifugal mhepo inofefetera, asi kudzvanya kwemhepo kunowanzoitwa kuburikidza akati wandei anoshanda ma impellers (kana akati wandei mazinga e) pasi pechiito che c...
Iyo yekushandisa modhi ine chekuita neruoko-inosundirwa centrifugal humidifier
Centrifugal humidifier tekinoroji, kusanganisira yekunze goko, inotsanangurwa muganda rekunze remukati Zvirongwa zviri kunze kwemhute, uye mhute ndiro yakaiswa kunze kwechute, inotsanangurwa mubhaa rekutsigira pazasi pekunze kwecasing yekubatanidza, ndokuisa pasi. ...
Unoda kuziva kuti centrifugal humidifier inoshanda sei?
na admin pa 21-03-25
Nheyo ye centrifugal humidifier ndeyokuti centrifugal rotary plate inotenderera nekumhanya kwepamusoro pasi pekuita kwemotokari, uye mvura inokandwa zvakasimba kunze kweplate yeatomizing, uye mvura yepombi inogadziriswa mu 5-10 microns ye ultrafine particles uye. akabva abudiswa panze. Mushure me b...
Iyo Gasi Patio Heater Inoita Kuti Hupenyu Hunyanye Kugadzikana
na admin pa 20-12-03
Iyo gasi patio hita inogona kuwedzera inoshamisa kumba kwako uye patio yako uye inogona kupa kudziya chero nguva yegore. Iyo gasi patio hita inonyanya kukosha munguva yechando, nekuti inopa mvura inopisa uye inodziya pane patio, uko kunowanzo kutonhora kunze. Izvi ...
Nzira Yokudzivisa Kushungurudzika Kwekupisa
Maheater eMagetsi Anounza Rusununguko Mutengo kune Kupisa Kwekunze
Gasi mitengo. Mazwi maviri anogona kurova kutya kunyangwe ane hutano hwewallet, uye nenzira dzatingadai tisina kumbofungidzira. Kupisa kwekunze kwekugara mumwe muenzaniso wakadaro. Nepo marudzi akasiyana egasi ekunze patio hita anosanganisira iyo Infrared Heater uye Propane Heaters yenzvimbo yekunze ...
NDEIPI MUsiyano pakati peMIST FAN NE AIR CONDITIONER?
Kana uri musiyano mukuru pakati pemhute feni nemhepo inofefetera, kureva kuti, mhute feni inoshandisa tekinoroji yecentrifugal kwete tekinoroji yemhando yepamusoro, saka unogona kuyambuka zviri nyore sezvaunoshuvira nepo air conditioner isingakwanise. Asi kunyanya kutaura, iyo misting fan mukuwedzera inofarira iyo ...